कमरेड केपी ओलीलाई खुल्लापत्र
आदरणीय कमरेड केपी ओलीज्यू,
२०५९ सालमा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लामाचौरमा अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनसँग विद्यार्थी हकहित सम्बन्धी माग तेर्स्याएर रिले अनशन आयोजना गरेका थिए । तपाईंलाई खुल्लापत्र लेख्दै गर्दा मैले त्यो अनशनमा सहभागी भएबापत प्राप्त गरेको एउटा प्रमाणपत्र सम्झें ।
पुराना कागजपत्रहरू राखिएको फाइल पल्टाउँदै जाँदा अनेरास्ववियुको झण्डा प्रिन्ट गरिएको त्यो रातो कागज फेला प–यो । मेरो राजनीतिक सहभागिताको इतिहास खोतल्न सहयोग गर्ने त्यो रातो प्रमाणपत्रले मलाई धेरैबेर घोत्लिन बाध्य बनायो ।
त्यसैको बलमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई मात्र दिइने होस्टेल सुविधा म एउटा स्याङ्जाको विद्यार्थीले पाएको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, विद्यार्थी हकहितको बारेमा लड्ने एउटै संगठन छ, त्यो हो अनेरास्ववियु । तलपट्टि हेरें, पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट आएर त्यसमा तुलबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका रहेछन् । अहिले उनी कहाँ के गर्दै छन भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ छु ।
२०६१ साल माघ १९ गते मैले केही साथीहरूको सहयोगमा स्याङ्जाको बयरघारीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही घोषणाको विरुद्धमा नारा लगाउने र टायर जलाउने काम गरेको थिएँ । घोषणाभन्दा अगाडि तपाईंको पार्टी नेकपा एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको नाउँमा सरकारमै आसीन थियो ।
ज्ञानेन्द्रले हुकुम प्रमाङ्गीबाट दिएको मन्त्रीपदहरूमा तपाईंका नेताहरू रमाइरहेका थिए । राजतन्त्रको विरुद्धमा तपाईंका विद्यार्थी नेताहरूले पहिल्यैदेखि आन्दोलन गर्दा कहिलेकाहीँ भाषणमा भन्ने गर्दथे, ज्ञानेन्द्रको टाउको काटेर फुटबल खेल्छौं । म दर्शकदीर्घामा बसेर ताली पिट्थें ।
अस्ति लैनचौरमा प्रचण्डको टाउको काट्ने घोषणा गरेका संगठनका एउटा नेता आरसी लामिछानेको कुराले मलाई ज्ञानेन्द्रको टाउको काट्ने अभिव्यक्ति सुनेको र ताली बजाएको याद आएको थियो । तर पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले राजालाई दाम चढाउँदै गरेको तस्वीर पनि झल्झली याद आयो । राति बाह्र बजे संसदमा दर्ता भएको महाकाली सन्धि पारित गर्नका लागि तपाईंले देखाउनुभएको इच्छा र तत्परताको इतिहासले मलाई मात्र होइन सबैलाई गिज्याइरहेको त थियो नै ।
अब समयलाई १० वर्ष फास्ट फरवार्ड गरौं । संविधान बन्ने क्रममा कोशेढुङ्गो मानिएको सोह्र बुँदे सहमतिको मुख्य डिजाइनकार तपार्इं हुनुहुन्थ्यो । त्यसैको जगमा टेकेर भएका अन्य भद्र सहमतिहरूमध्ये तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने र सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने सहमति तोडिएको दिन मलाई नराम्रो लागिरह्यो । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुले संविधान बनाउनका लागि गरिएको सहमति पनि भंग हुने त्रास थियो । म खुलेर तपाईंको पक्षमा लागें ।
तपाईंको सरकार चलिरह्यो । शुरुशुरुमा सपना देख्न सक्ने भिजन भएको प्रधानमन्त्री जस्तो लाग्थ्यो, तर आफ्नो पक्षमा बढेको जनमतलाई तपाईंले सपना बाँडेर खुशी दिन लाग्नुभयो । केही खुशी पनि भए तर जनताको त्यो कष्टकर जीविकालाई सपनाले मात्र राहत दिन सक्दैनथ्यो । चीनसँग केही सहमति भएपनि त्यो फगत कागजमा मात्र थियो, तर जनतालाई वास्तविक राहत चाहिएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रवादसँग जोड्न सकिएपनि जनजीविकासँग जोड्न मिल्दैनथ्यो ।
कामभन्दा धेरै गफमा रमाउन थालेपछि म मात्र होइन, तपाईंका धेरै समर्थकहरू विरोधी कित्तामा उभिए । तिनीहरू जसलाई कामसँग मतलब छैन, जसले जनताको वास्तविक परिस्थितिको बारेमा बुझेको छैन, राजनीतिक दलहरूको वास्तविकताको बारेमा बुझेको छैन, अझै पनि तपाईंको देवत्वकरण गर्न व्यस्त छन् ।
एउटा निश्चित वर्ग, गुट, नश्ल या जातिको लागि मात्र गरिएको राजनीति राष्ट्रिय राजनीति हुँदैन । आज पनि मैले देख्ने गर्छु, मधेशी, जनजाति लगायतका कैयौं अन्य समुदायहरू नेकपा एमालेको नश्लीय राजनीतिकै कारणले विभेदमा परेको गुनासो गर्दैछन् ।
संसदमा रहेको दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिलाई छोडेर साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउने गरी आफूलाई ‘प्याराडिम सिफ्ट’ गराउँछ भने हाम्रो अबको दशक कसरी बित्ला ?
गुनासो तपाईंसँग होइन, मैले आफैंसँग गुनासो गरिरहेको छु कि म त्यो देशको नागरिक हुँ जसले फरक मत राखेकै आधारमा व्यक्तिगत चरित्रहत्याको शिकार बन्नुपर्छ ।
मेरो फोटोमा भारतीय दलाल, दूतावासबाट पैसा खाएको, कर्णाली बचाऔं अभियानको नाममा टिशर्टको कारोबार गरेको लगायतका नानाथरी अपुष्ट आरोप लगाउने तपाईंबाट प्रेरित भएका आजकलका बच्चाबच्ची एमालेजन देख्दा म कुनै दिन रातभरि पोखरामा एमालेकै कार्यक्रम अन्तर्गत ब्ल्याकआउट गर्न हिँडेको कुरा स्मरण गर्न चाहें । विचार र सिद्धान्तहरूमा बहस गर्न मलाई पनि आउँछ ।
एमाले के हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सम्भवतः पछिल्लो समयमा तपाईंको हाई हाई मात्र गर्ने धेरै अनुयायीलाई भन्दा धेरै थाहा होला मलाई ।
तपाईं केबाट बच्नुपर्नेछ भने जुन अराजक समूहहरूले तपाईंले उठाएको खोक्रो राष्ट्रवादको मुद्दालाई लिएर तपाईंलाई देवत्वकरण गरेका छन् र भिन्न विचारलाई दलालीपनाको उपमा दिएका छन्, यो राष्ट्रवाद खोक्रो हो भनेर प्रमाणित भएको दिन तिनैले तपाईंको खोइरो खन्नेछन् । यसकारण त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको एमालेको उपलब्धिलाई निष्ठासँग जोडेर जनसमुदायमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
अब कुरा गरौं हिजोआजको राजनीतिको । संविधान कार्यान्वयन भनेको चुनाव मात्र हो भनेर जसरी एकपक्षीय कुरा तपार्इं र तपाईंको पार्टीका अन्य नेताहरूले फैलाइरहेका छन्, त्यसको कुनै तुक छ र भनेको ? किनभने कार्यान्वयन भनेको संशोधन पनि त हो । त्यसको विधि र प्रक्रियामा बहस गर्न सकिन्छ, त्यसमा एमाले सहभागी बन्न सक्नुपर्दथ्यो । यो एमाले नेतृत्वलाई गरिएको आलोचना मात्र होइन, भरोसा पनि हो ।
बेबुनियादी र खोक्रो आडम्बरमा आधारित भएको राष्ट्रवादको माला आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जप्न लगाएर तपाईंले एमालेको विचारसँग सहमत नहुने जति सबै राष्ट्रघाती हुन् या विदेशीका दलाल हुन् भन्ने भाषाशैलीको प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै तपाईंका अनुयायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा अरूविरुद्ध विषबमन गरिरहेका छन् । कैयौंले धम्कीको भाषा पनि बोल्ने गर्दछन् । यसले राष्ट्रवादीहरूको आन्तरिक एकतालाई कहाँ लैजान्छ ? तपाईंको नेतृत्वले यसबारेमा कहिल्यै सोचेको छ ? संविधानको स्वीकार्यता बढाएर देश विघटन हुन्छ ? कि साम्प्रदायिक एकता खल्बल्याएर देश विघटन हुन्छ ?
देशको अस्मिता खतरामा परेको साँचो हो, र यो पनि साँचो हो कि देशको अस्मिता लिलामी शुरु भएको प्रचण्डको सरकार बनेपछि मात्र होइन, यसको ग्य्रान्ड डिजाइन धेरै पहिलादेखि नै शुरु भएको हो जसमा तपाईंको पनि भूमिका छ । हरेक नेपालीलाई देश दुखेको छ र मलाई पनि उत्तिकै दुखेको छ । तर युवाहरूबीचको यो विखण्डनको कारकतत्व बनेर देश जोगिन्छ ?
ओलीज्यू, संसद् अवरोध गर्ने कुरा संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो, गर्नुस् । विरोधसभा र –यालीहरू चाहिँ गर्न मजाले पाइन्छ, त्यसमा पनि आपत्ति छैन । टायर बाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने पनि नेपाली राजनीतिको संस्कृति नै बनेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो धेरै आपत्ति छैन । आपत्ति छ त केवल तपाईंले गलत सन्देश दिएर एकथरी युवाहरूको मनोबल गलत ढंगबाट उकास्दै हुनुहुन्छ ।
संसद् अवरोध गर्ने या विरोध जुलुस निकाल्ने कामलाई राष्ट्रवादबाट प्रेरित हो भनेर एकतर्फी कुरा गर्नुभएको छ । गलत राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्नेहरूलाई पनि राष्ट्रवादी देख्ने नयाँ सूत्रको प्रयोग गरेर हेर्नुस् । एउटा नश्ल, जात, गुट र समुदायको राजनीति गर्न छोड्नुस् ।
राजनेताहरूले चिरा परेको राष्ट्रको एकतालाई जोड्ने काम गर्छन् । कैंची लिएर काट्न हिँड्दैनन् । सुन्दा मीठो लाग्ने, उखान, टुक्का र क्षणिक आवेगको राजनीति गरेको भए नेल्सन मण्डेला कालाहरूको मात्र नेता बन्थे, संसारले राजनेता मानेर पुज्दैनथ्यो ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ, चाहे जसरी होस् । यसमा पनि तपाईंको चलखेललाई शंका गर्ने ठाउँ त प्रशस्तै छ । तर जे भएपनि संसदमा छलफल हुने कुरा राम्रो हो, विधेयक राष्ट्रहितमा छैन भने पनि पर्याप्त छलफल गरेर जनतालाई त्यसको बारेमा जानकारी दिएर त्यसलाई फेल गर्नुहोस् । फेल गरिदिएर मात्र पनि तपाईंको उत्तरदायित्व पूरा हुन सक्दैन, अहिले राजनीतिमा जमिरहेको हिउँलाई पगाल्न कुनै उत्कृष्ट विकल्प दिनुहोस् ।
धेरै दिनपछि नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने क्रममा यो खुलापत्र लेखेको छु । मलाई आशा छ, एउटा स्वतन्त्र युवाले यहाँ लेखिएका शब्दहरू र शब्दका भावहरूलाई गहिरो गरी बुझ्दछ र जसले नबुझी कसैको ट्याग भिराएर प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसलाई पनि सम्मानकै साथमा लिइनेछ । जनतालाई सुसूचित गराउने र नेतालाई राजनीतिक खबरदारी गर्ने मेरो अभियान त जारी नै रहनेछ । विश्वास छ, तपाईंले पनि पढ्ने मौका पाएर यसमा लेखिएका कुराहरू मनन गर्नुहुनेछ ।
ईश्वर अर्याल (हाल युएई ) पुस २७, २०७३ मा प्रकाशित